BBC Somali - Warar - Labada Sudan oo ka heshiiyey murankii saliidda
Labada Sudan oo ka heshiiyey murankii saliidda
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 4 Agoosto, 2012, 17:32 GMT 20:32 SGA
Konfurta Sudan, waxaa ay joojisey Saliidii ay soo saari-jirtey, bishii January ee Sanadkan.Hase ahate, wali ma-kala cadda, goorta ay Konfurta Suudan bilaabidoonto, soo saarista saliidaas.
Labada dal, wada-hadalo socdey sadex toddoobaad ayey ku yeesheen magaalada, Addis Abeba ee Xarunta Ethiopia.
Wakaaladda wararka ee Suudan, waxaa ay xaqiijisay, warkaas heshiiska ku saabsan iyado soo xiganaysey, Af-Hayeen u hadlay Kooxda Suudan ee wada-hadalada ka qayb galay, hase ahaate, Wakaaladu ma-aanay bixin wax faah-faahin ah.
Af-Hayeenkaasi oo magiciisa la yiraaho, Mutrif Sidiq, waxaa uu sheegay in hirgelinta Heshiiskaas la bilaabi-doono, marka Is-Af-Garad, laga-gaaro, arrimo ku saabsan Amaanka.
Murankaas ku saabsan, batroolka, waxaa uu si-weyn u saameeyey, dhaqaalaha Labada dal.
Heshiiskaasi, waxaa la filaya in ay dawlada Konfurta Sudan ay Lacag mag-dhaw ah ay siiso, dawlada Suudan ee magaalada Khartoum oo Lacag aad u badan oo ay Batroolka ka helijirtey ay weydey, markii Konfurta Suudan ay ka go'day, dalka Suudan intiisa kale sanadkii 2-badii Kun iyo 11kii.
Markii ay Konfurta Suudan ka go'day, waxaa ay la tagtay, Saliidii ay Suudaan soo saari-jirtey, marka sadex-meelood loo qaybiyo, Laba meelood ahaan.
Mar sii horaysena, Madax-Weynihii hore ee dalka South Afrika, Thabo Mbeki oo imika Midoowga Afrika uga qaabilsan, 'Arrimaha Dhex-Dhexaadinta' oo arrinta heshiiskaas ka hadlay, waxaa uu sheegay in arrimihii taagna oo dhan laxaliyey.
Mr. Mbeki, isago magaalada Addis Abeba oo uu ku shirayey Golaha Midoowga Afrika uga qaabilsan, 'Nabada iyo Amniga', kula hadlaya, dadka warka, waxaa uu sheegay in dhinacyadii is-hayey ay ka heshiiyeen, wixii Lacag ku saabsana xagga Saliida oo